\_WelcomeTo QuljeedNet Awdal Home Contact Us About US <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 30-12-2012
KU: Madaxweynaha Somaliland, Mudane Maxamed Maxamoud Siilaanyo , KU: Gudoomiyah Golah Doorashada Qaranka,
Hadaanu nahay Cuqaasha, iyo aqoon yahaynka jaaliyada Awdal, Selal, Gabiley iyo Gooska Africa intiisa kale ee kunool dalalka Maraykanka, Ingiriiska Yurub inteeda kale iyo Kanada waxaan hanbalyo iyo bogaadin u diraynaa dadwaynha degmada Saylac oo si buuxda oo nabada ugu guulysatay in ay si xora’h u doortaan xubnihii matali lahaa degaankooda. Waxaanan ka xun nahay faragalinta lagu samaynoyo natiijada doorashada iyo dib udhaca loogaysanyo si looga horjoogsado in ay u adeegaan bulshadii soo dooratay. Sidoo kale waxa an mahad naq balaadhan iyo bogaadin u diraynaa dad waynaha muujiyay dareenkooda ku aaddan arintani ee dhigay didbad baxa si ay u taageeraan xubnaha sharciga a eh ee degaankaku dooray Sidaan wada ognahay ummada aagaas kunool ee walaalaha ah waxay leeyihiin taariikh wadanoolaa sha’ah oo ay qaraabo taxana’ah ku aahayeen deegaankaas. Degmada Saylac ma’ha meel lahaanshaheeda lagu muran sanayhay . Waana layqaana cidda degaan ahaan uleh . Waxana ay arintaasi ku cadahay doorashaddii degaanka aagaasi ka dhacday.
Hadaba waxaan meesha qaban oo aad u foolxun in xukuumada Somalailand ay gees marayso xeerarkii ay abuurtay ee doorashadu ku qabsoontay. Faragalinta iyo xaal abuurka lagu hayo dadwyanaha ku dhaqan degaanka saylac iyo maamulkooda cusub waa mid ka baxasan nidaamka dawladnimo , sharciga dalkau udagsan iyo xeerka doorashooyinka soomaliland. Waxa muuqata in xukuumadu ku hawllan tahay sidii ay waxa ugu badali lahayd maamulka Saylac iyada oo sharciga gees marsan. Arintaasi , waxanu u aragnaa shirqool iyo xaal abuur qorsheysan oo xume talis soo abaabulay si dadka wada dagan ee walaalaha loo dhexdhigo dhibaato weyn oo iil danbe reebta. Arintani waxa ay abuurtay murugo qoto dheer. Waxaan ku baaqaynaa qodobadan hoos kuqoran in lafuliyo sida ugu dhaqsaha badan,
1. In xukuumadu joojiso faragaslinta ay ku hayaso maamulka cusub ee loo doortay Golha degaanka Saylac oo ku soo baxay doorasho sharciga oo ay xukuumada horey u meelmarisay. 2. Waxanu u aragnaa garadarro iyo faragalin qaawan falalaka xaaraanta ah xukuumadu kula kacday degaanka Saylac
3 In la xurmeeyo , la meelmariyi ismarkaana latixgaliyo doorashaddii xubnaha goloha degaanka Saylac ay ku doorteen Duqa magaalada Saylac iyo ku xigeenkiisa loona fududeeyo in ay hawshooda qabsadaan oo an la carqaladayn doorashadaasi waayo waa mid sharciga iyo xeerka doorashada qaranka waafaqsan oo salka ku haysa go’aanka codaka nin dheeriga ah 4 In gudoomiyha Gobolka Awdal, Xeer ilaaliyaha guud, iyo Maxkamada Sare ee Gobolka Awdal ay gutaan shaqdooda ku aaddan arinatani oo ay dhaariyaan xubnha cusub ee degaanka Saylac .
8 Waxan ugu baaqaynaa shacabka xorta ah ee goboladaas in ay is abaabulaan una diyaar garoobaan sidii ay, sharaftooda, qaran nimadooda, iyo degaanadooda uga difaaci lahayeen jaah wareeraka siyaasadeed ee larabo in laga hirgaliyo Degmada Saylac 9 -Ugu danabayn Waxanu ugu baaqaynaa bulshowayntaa ku dhaqan guud ahaan gobolda ,Awdal iyo Salal in ay isugu yimaadaan shir qaran oo ku salaysan aayo katashi siyaasadeed si loo waajaho khatarta ku soo fooleh faragalaainta xumaadu ka wado degmada Saylac .
Marka bulsho meel degan halis lagaliyo nabadgalyadeeda, Jiritaankeeda, lana duudsiyo xaqeeda, lana yaraysto shacabkeeda, karamadeeda, sharafteeda, la isku dayo in laga xarimo rabitaankeeda siyaasadeed, la dhaawaco kaabayaasheeda dhaqan, dhaqaale islamarkaana loola dhaqmo si xaqiran oo ka duwan sida loola dhaqmo kuwa ay lafaca yihiin ee ku nool geeska Afrika, waxa ay ummadaasi xaq u leeday in ay ka dhiidhido xad gudubyadaasi oo ay difaacdo xaqooda iyo karaamadooda. Saxeexa yaasha Bayaanka .
1- Gaas Abdullahi farah 2- Maxamed Xuseen Sayre
6- Abdifatah Maxamuud warsame 7- Xaliimo Muxumed Sacad
21- Maxamed Abdullahi Maxmoud 22- Osman Yususf Tallan
23- Foosiya Climi Abdillahi --Coofle
24- Maxamed Habane Abdi 25- Nuur Dahir Hanfi